PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: အခန့်မသင့်ရင်စစ်တောင်ထဖြစ်နိုင်တယ် ။။။။။။။
Post by Ko Htut.
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းက လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ..
အဲဒီမှာ AC Bar လို့ ခေါ်တဲ့ ဘားမှာ ..ဒေးဗစ်နဲ့ ဟမ်နာ ဆိုတဲ့ ဗြိတိန်စုံတွဲ နှစ်ယောက်လည်း သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်ကြစားကြတယ်
လူသတ်မှု ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ... ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဟမ်နာရဲ့ ဖုန်းကို မြန်မာလူမျိုး ကောင်လေးနှစ်ယောက် အခန်းမှာ တွေ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် ..
အဲဒီဆိုင်မှာ သောက်စားကြပြီး မျက်မြင်တစ်ချို့ရဲ့ အပြောအရ ဒေးဗစ်တို့ စုံတွဲနဲ့ ဘားက လူတစ်ချို့နဲ့ စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
သွေးစွန်းနေတဲ့ ဂီတာရယ် .. လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ ဒဏ်ရာရထားတဲ့Mr. Sean ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်
သူ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ... ထုိုင်းမာဖီးယား လူဆိုးတွေက သူ့ကို လိုက်သတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ခဲ့တာကို .. ပုံ ၃ မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်
အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ...ထိုင်းတွေရဲ့ အလိုအတိုင်း . အဖြစ်မှန်တွေကို လိမ်လည်ထွက်ဆိုခဲ့ပုံရပါတယ်.... သူ့မှာ ရထားတဲ ဒဏ်ရာတွေက
ထို ဒဏ်ရာများ နည်းတူ ရန်ပွဲက လွတ်မြောက်လာတဲ့ Mr. Sean ရဲ့ လက်နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ ပုံစံတူ တစ်လက်မ ဓါးအသုံးပြုထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့် ပေါက်တူးကို အသုံးပြုပြီး သတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းရဲတွေရဲ့ မြန်မာလူမျိုးကောင်လေးတွေအပေါ် စွပ်စွဲထားတဲ့ အချက်တွေက မှားယွင်းနေတာ သိသာလာပါတယ်
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေက ပိုပြီး ခိုင်မာလာတဲ့အတွက်
Koh Tao ကျွန်းလူသတ်မှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုရေးတာကိုဆဲချင်လဲဆဲကြပါ။
စပြီးအသတ်ခံရထဲကစိတ်ဝင်စားလို့ Mirror တို့Straight Time ကိုသေချာဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအမှုအကြောင်းအတော်လေးသိခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကောက် Post ကိုလဲယုံမရပါဘူး ဒါ့ကြောင့်သူ့ဆီမှာတော့ comment ပဲဖတ်ပါတယ်။
မြန်မာ Media တွေမှာခေက်စားလာတာဒီကလေးတွေအဖမ်းခံရပြီးမှပါ။
ခုအဖမ်းခံနေရပြီးဝန်ခံလိုက်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတကယ်လူသတ်သမားမုဒိန်းသမားတွေအဖြစ်မြန်မာတွေကရော ကမ္ဘာကပါမယုံကြဘူး လက်မခံကြဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရေးကြပြောကြတယ်။
သူတို့ရုပ်ရည်နဲ့လူသတ်သမား မုဒိန်းသမားမဖြစ်နိုင်းဘူး အစားထိုးခံရတယ် ငွေယူပြီးဝန်ခံခိုင်းတယ် မတရားနှိပ်စက်ပြီး ဖြောင့်ချက်တောင်းတယ် စသည်ဖြင့်ပြောကြပါတယ်။ တစ်ခုသတိချပ်ရမှာက သူတို့တကယ်သတ်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်အော်အော်သူတို့အတွက်အထောက်အပံ့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီလိုအော်နေသူတွေကရော
သူတို့မဖြစ်နိုင်တာကိုဘာနဲ့သက်သေပြနိုင်လဲ။ ဘယ်သူမှမပြနိုင်ပါဘူး။ ဒါကို တပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ ဟန်းကော ရိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ။
ကောလဟာလ ပေါ့ ဖြစ်စေချင်တာ ထင်ရာတွေကိုပြောတယ် ဘောင်မဝင်ဘူး ။
ကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ အမြဲပြုံးနေတဲ့လူသတ်သမားတွေ အရမ်းကိုသန့်ပြန့်တဲ့ရုပ်ရေသွင်ပြင်နဲ့မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူတွေနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတာတွေကိုရပ်လိုက်တော့။ ရေးထားတဲ့ comment တွေကို edit လုပ်ရင်လုပ် မလုပ်ရင် deleted သွားလုပ်လိုက်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်။
မြန်မာတွေရောထိုင်းတွေရော scapegoat မြင်တာနဲ့ goat ဆိုတာ ဆိတ်ပဲဆိုပြီး ကလေးတွေကို ဆိတ်ဖမ်းသလိုဖမ်းလာတယ် ဘာညာလျှောက်ရေး ပုံတွေလုပ် တကယ်တော့ scapegoat ဆိုတာ ထိုးကျွေးခံရတာ အပြစ်မရှိပဲနဲ့တရားခံအဖြစ်ဖြစ်သုံးချခံရတယ်လို့ ပြောတဲ့ idiom စကားလုံးသာဖြစ်တယ်။ ခုချိန်ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့
ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူရဲ့ သွင်ပြင် အသက် ဥပတိရုပ် ကျွန်းပေါ်ရောက်တာကြာခြင်းမကြာခြင်း ထိုင်းစကားတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းဟာ
သူ့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့အမှု ထိုင်းရဲတွေမစစ်နဲ့ FBI ကိုခေါ်စစ်ခိုင်းမယ်။ စကော့တလန်ယာဒ် ခေါ်ကိုစစ်ခိုင်းမယ်လုပ်လို့မရပါဘူး။
နိုင်ငံတိုင်းမှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ နည်းပညာအကူအညီပေးတာ အကြံညဏ်ပေးတာပဲလုပ်လို့ရပါမယ်။
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ??? Koh Taoမှာအဲ့ဒါတွေဘယ်လောက်ပေါလဲဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့မေးကြတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးအုံးမယ် တကယ်သတ်တဲ့လူဆိုရင် ဒီကျွန်းမှာဆက်နေပါ့မလားဆိုတော့ ပြေးချင်တိုင်းပြေးမရပါဘူး။ ကျွန်းရဲ့လူအဝင်အထွက်ကိုကန့်သက်ထားပါတယ် ထိုင်းရဲတွေက ဘယ်သူမှပေးမပြန်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။
လူတွေပြောတဲ့အထဲမှာ David Miller ရဲ့အရပ်က ခြောက်ပေ သုံးလောက်ရှိတယ် ဒီကလေးတွေလိုဖလံလေးတွေကရေနှစ်သတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် ဗလမရှိလဲဇရှိတယ်တို့ Size is doesn't matter ဆိုတဲ့စကားတွေကဘာလို့ပေါ်လာသေးလဲ ???
နောက်တစ်ခုက မသေခင်ကမ်းခြေမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ဘယ်သူသိလဲ ဘယ်သူမှမသိဘူး။
အသတ်ခံရသူတွေရဲ့အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ ကာယကြံ့ခိုင်မှု ပါတ်ဝန်းကျင်အနေအထား သတ်သူတွေရဲ့လူအင်အား လက်နက် အင်အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ မူးယစ်ဆေးသုံးထားခြင်းရှိမရှိစတဲ့ အခြေအနေစတာတွေ ကိုသိသူလုံးဝထွက်မလာပါဘူး ။
နောက်တစ်ခုက သေသူ ရဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာအခင်းဖြစ်ရာအနီးမှာတွေ့တဲ့ ပေါက်တူးနဲ့မတူဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ထဲမှာမှုခင်းဆရာဝန်ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ ပေါက်ပြားအရွယ်ဘယ်လောက်လဲသိလား???ဘာနဲ့သတ်သေပြမလဲ???
သေသူမိန်းကလေးကို ပေါက်တူးနဲ့သတ်ပြီး အမျိုးသားကိုတခြားလက်နတ်နဲ့သက်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်ဒီကလေးတွေသတ်တယ်လို့သေချာပြီလားဆိုတော့ သံသယအဖြစ်ခံရတုန်းပဲရှိသေးတယ် တရားခွင်မှာခုခံလို့ရသေးတယ်
English လိုရေးတဲ့ site တွေကိုတတ်ပြီးထိုင်းတွေပါရောပြီးဆဲတာတွေ လူစုံစုံမှာတတ်ပြီးဒီရုပ်လေးတွေကလူသတ်ပါ့မလားသွားသွားမရေးနဲ့ ကြာရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေ ရောထိုင်းတွေပါအမြင်ကတ်လာလိမ့်မယ်
" ရေးသင့်တာကသေဆုံးသူတွေအတွက်ဝမ်းနဲကြောင်း အမှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးအမှန်အတိုင်းဖြစ်စေချင်ကြောင်း
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရေနဲ့လုပ်ရပ်ကိုပြန်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း " ဒီလောက်ဆိုကောင်းနေပြီ
ဒီအမှုဟာ သံသယဖြစ်စရာ တွေ မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်
ကလေးတွေအရပ်က ငါးပေလေး နဲ့ငါးပေငါးပဲရှိတယ်
ထွက်ပြေးတာ တိုက်ခိုက်တာမလုပ်ဘူးလား အမျိုးသားကိုသတ်ပြီးမှအမျိုးသမီးကိုမုဒိန်းကျင့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်
လူတစ်ယောက်ကိုလောလောလတ်လတ်သတ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါ့မလား ??? ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးကိုသတ်ပြီးမှ အမျိုးသမီး body ကို rape လုပ်ခဲ့တာများလား ??? ဒီလောက်ဇပြင်းလား ??? ဒီကလေးတွေအရင်ကရောကျူးလွန်ဘူးတဲ့ပြစ်ချက်အဟောင်းရှိလား ???
သူတို့ဟာ အရင် DNA အစစ်ခံရတဲ့ အယောက် 30 ထဲမှာပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ်
သီချင်းဆိုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲ ဒါပေမယ့် သေသူအမျိုးသမီးဆီကလူသတ်သမားရဲ့ သုတ်ရည်ကိုစစ်ရာမှာတွေ့တဲ့ DNA နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဆိုပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့တယ်
လူတွေသိချင်တာက DNA က ခုမှဘာလို့လာပြီးတူနေတာလဲ ဒါမျိုးရှိလို့လား ???
အသတ်ခံရတဲ့စုံတွဲဟာ AC ဘားကထွက်မလာခင်သူတို့ဘားက လူတွေနဲ့စကားများကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့တယ်
သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ ခုဘယ်မှာလဲ ???
AC ဘားမှာ part time အလုပ်လုပ်တဲ့ သေသူရဲ့သူငယ်ချင်း စကော့လူမျိုး Sean ဟာ ကမ်းခြေကနေ တောထဲထွက်ပြေးပြီး ပုန်းနေခဲ့တယ်
သူ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ AC ဘားပိုင်ရှင်သတ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ status ရယ် AC ဘားက ထုိုင်းဖီးယားတွေ သူ့ကို လိုက်သတ်ဖို့ရှာနေကြပြီ ကယ်ကြပါဆိုပြီး Status တင်ခဲ့တယ်
ခု သူပြောတဲ့မာဖီးယားတွေဘယ်ပျောက်နေလဲ ???
Sean ရဲ့စကားကိုပိုပြီးခိုင်လုံစေတာက သူရဲ့လက်နဲ့ခြေထောက်မှာသေသူ အမျိုးသားရဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းကဒဏ်ရာနဲဆင်တူတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရတယ်
လက်နက်ဟာလက်သီးထဲကိုထည့်ပြီးသုံးတဲ့ဓားတိုကလေးတွေလို့ယူဆရတယ် ဒီလက်နက်နဲ့ ကလေးတွေအကျွမ်းဝင်လား??? ဘယ်သူတွေဆောင်တတ်လဲ ???
ဒါကို Sean ဘာလို့ ဆိုင်ကယ်စီးရင်းဒဏ်ရာရတာလို့လိမ်ပြီးထွက်ဆိုခဲ့လဲ ??? သူဟာသေဆုံးသူနဲ့အဲ့ညကအတူမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လွင်အောင် facebook မှာ
ဘာလို့ status တင်ပြီး
တကယ်ပဲကလေးတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်ပြီးဖြောင့်ချက်ရယူခြင်းခံခဲ့ရလား???
ကလေးတွေ ဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုတဲ့ နေရာနဲ့ ဒီလောက်ကပ်နေတဲ့နေရာမှာ
ချစ်တင်းနှောတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ??? ဘာ့ကြောင့်ဘယ်သူမှနေရာရွှေ့ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ရတာလဲ???
ဒါမျိုးမြင်ယုံနဲ့စိတ်မထိမ်းနိုင်ရအောင်ကမ်းခြေမှာအရင်ကရောဒီလိုတွေမလုပ်ကြလို့လား သူတို့မမြင်ဘူးလို့လား ???
AC ဘားပိုင်ရှင်ကျွန်းသူကြီးရယ် သူ့ညီရယ် သူ့သားရယ် အစပိုင်းမှာ DNA စစ်တာကိုဘာလို့ အစစ်မခံလဲ ???
စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုက်ညီခြင်းမရှိဆိုတာရောသေချာလား(အဲ့ဒီ့အချိန်မှာရဲချုပ် Koh tao ဆင်းမလာသေးပါဘူး)
AC ဘားပိုင်ရှင်ကျွန်းသူကြီးကသူ့အမေနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အရမ်းရင်းနှီးပြီး
ဘာကြောင့်ပြောသွားတာလဲ??? ဒါ့အပြင် သူကသတင်းစာတွေကိုတရားစွဲမယ် သူတို့လုပ်တာသတ်သေပြနိုင်ရင်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဘာလို့ထလုပ်ရတာလဲ ??? ကာဗာယူတာလား မလုံတာလား ????
အလောင်းတွေတွေ့ပြီး ကျွန်းအသွားအလာကိုပိတ်လိုက်တာမနက် 10am မှဖြစ်ပြီး
မနက်ငါးနာရီခန့်မှာ ကျွန်းကနေ ရေကြောင်းမေးပြီးထွက်သွားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာဘယ်သူတွေပါသွားလဲ ????
ဘာလို့ဒီကလေးတွေဆီကရတယ်လို့ပြောရတာလဲ ??? သူ့မှာဖုန်းနောက်တစ်လုံးရှိသေးရင်တောင်ဒီကလေးတွေက
ဒီကလေးတွေဟာကျွန်းပေါ်မှာ cctv ကင်မရာတွေဒီလောက်များတာသိရဲ့သားနဲ့
လူသတ်ပြီး သေသူရဲ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ဝတ် အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ ပြေးနေတယ်ဆိုတာရော ယုတ္တိရှိရဲ့လား ???
ဒါ့အပြင်ဘာကြောင့် cctv footage clip ထဲက သုံးမိနစ်စာကိုဖျတ်ထားရတာလဲ ???
သတ်တာ မြန်မာလို့ ပြောလိုက် ထိုင်းလို့ ပြောလိုက် လူဖြူလို့ ပြောလိုက် နဲ့အမျိုးမျိုးပြောပြီး ဟိုလူ့ဖမ်း ဒီလူ့ဖမ်း ပြီးရင်ပြန်လွှတ်အနဲဆုံးသုံးခါလုပ်ခဲ့တယ်ထိုင်းရဲတွေ
ထိုင်းတွေရော နိုင်ငံခြားသားတွေကပါ ဝိုင်းပြီးစောက်သုံးမကျဘူးလို့
ပြောတာခံနေရတဲ့ထိုင်းရဲတွေရဲ့အရည်အသွေးဘာလဲ ဘယ်လဲ ????
သူတို့အတွက်ဆားပုလင်းနှင်းမောင်တို့ CID တို့ FBI တို့ကဝိုင်းကူမှရမှာလား ဘာကြောင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာလဲ ???
သို့လော သို့လော တွေအများကြီးနဲ့လူသတ်မှုပါ
တကယ်ပဲ ဒီကလေးတွေဟာ ထိုးကျွေးခံရတာဆိုရင်တော့တကယ်သနားစရာပါ။
တရားဥပဒေမှာစကားတစ်ခုရှိတယ် အပြစ်ရှိတဲ့သူ ၁၀၀ မှားလွှတ်မိတာထက် အပြစ်မဲ့သူတစ်ယောက်မှားပြီးအပြစ်ပေးခံရမှာပိုစိုးရိမ်ပါတယ်တဲ့။
Posted by PNSjapan at 9:20 PM